Kolombiyaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 9:38 10 Adooleessa 20219:38 10 Adooleessa 2021
Haayitiin erga pirezidaantiin ishee ajjeefamee loltoota alaa gargaarsa gaafatte
Haayitiin erga pirezidaantiinshee jalaa ajjeefamee bu'uuraalee misoomaa murteessoo akka eeganiifiif loltootni biyyoota alaa biyyasheetti akka ergaman gaafatte.
...tti maxxanfame 7:40 27 Waxabajjii 20217:40 27 Waxabajjii 2021
'Nama haleellaa pirezidaantiirratti odeeffannoo naaf kenne nan badhaasa' Kolombiyaa
Pirezidaantiin Kolombiyaa Ivaan Duuk osoo dhiheenya buufata xiyyaara Kukutaa kan daangaa biyyattiifi Veenzuweelaatti argamuutti dhiyaataa jiranu ture guyyaa Jimaataa xiyyaara keessa tureniitti kan dhokaafame.
...tti maxxanfame 7:02 26 Waxabajjii 20217:02 26 Waxabajjii 2021
Helikooptara pirezdaantii Kolombiyaarratti dhukaasi baname
Hilikooptarri pirezdaantii Kolombiyaa fi qondaaltoota motummaa kan biraa qabbattee turte osoo naannoo daangaa Venizuweelaa irra balaliituu dhukaasa raawwatameen rukutameera.
...tti maxxanfame 5:16 15 Ebla 20215:16 15 Ebla 2021
Reporting from Urabá (Colombia) for BBC News Mundo
Feenii Iskoober hoggantuu dhaabata tajaajila hawwaasaati, naannoo walitti bu'insi hammaatuufi beekamu Kolombiyaa keessatti hoggantuu beekamtuudha. Humnaan gudeedamteetti. Ari'atamteetti, lubbuushee baasuuf doorsifamaa turte, maatiin ishee gariin ajjeefamaniiru..... garuu ammayyuu hawwaasa ishee tajaajiluuf kutatteetti. Kun seenaa isheeti, akkaataa isheen himtetti.
...tti maxxanfame 6:18 22 Fuulbaana 20206:18 22 Fuulbaana 2020
US odeeffannoo hogganaa hidhataa Kolombiyaa nama argateef birrii miiliyoona 180 kennuuf
Ameerikaan nama odeeffannoo hogganaa riphee loltuu Waraana Bilisa Baasaa Kolombiyaa qabuuf gargaaru kenne birrii miiliyoona 180 kenna jette
...tti maxxanfame 9:56 23 Bitooteessa 20209:56 23 Bitooteessa 2020
Walitti bu'insa mana hidhaatti uumameen namoonni 23 du'an
Sirreeffamtoonni yaaddoo koronaavaayirasiin wal qabatee haala tajaajila fayyaafi walitti baayina mana hidhaa keessaa irratti mormii kaasaniin, yoo xinnaate namoonni 23 ajjeefaman.